Ehmey को फूल
इम्मेरा ब्रोमिलियड परिवारको एक सुन्दर र अनौठो फूल हो। धेरै सजावटी र यो फोल्डल आकारको गुलाबी पत्तिहरू, र फूलहरू आफैमा एकत्रित।
प्रकृतिमा, दक्षिण र मध्य अमेरिकामा इम्मे अधिक सामान्य छ, जहाँ यसको 170 वटा प्रजातिहरू बढ्छ। हाम्रो कोठाको अवस्थाहरूमा, दुई प्रकारको एम्मेई सर्वोत्तम उपयुक्त छन्: यो चमकदार र धारीदार छ।
Ehmeya - खेती र हेरविचार
इम्मेय एक फोटोफिलस बिरुवा हो, तर यसले पेन्ग्रुरामा बढ्दै जान्छ। सबै भन्दा राम्रो, यो पूर्वी वा पश्चिम विन्डोमा देखिन्छ। इम्मेया, जो कडा पत्तीहरू छन्, दक्षिणी विन्डोमा राम्रो हुन्छ, तर सबैभन्दा धेरै घण्टामा यो छायांकित गर्नु पर्छ। गर्मीमा, फूल बालकनीमा राख्न सकिन्छ, तर यसलाई बिस्तारै नयाँ स्थानमा अनुकूल गर्न आवश्यक छ।
गर्मीमा, ईम्मीको इष्टतम तापमान शासन 20-26 डिग्री सेल्सियस, र जाडो समयमा 17-18 डिग्री सेल्सियस हुनेछ। यो रोपण तापमान परिवर्तनबाट डराउँदैन र ताजा हावा मनपर्दैन।
आम्मेका लागि सिंचाईको लामो अभाव घातक छ। गर्मी मा, यो पक्का मा मिट्टी को थोडा नमी यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। एक फूलको पानीको लागि यो निरन्तर उज्यालो पानीले आवश्यक छ, यसैले यो पत्तिको पानामा पानी हाल्नु आवश्यक छ, र पहिले नै त्यस पछि माटोमा। शरद ऋतुमा, पानी कम गर्न सकिन्छ, र जाडोमा माटोको माटोको माटो सुक्नु पर्छ। यस अवस्थामा, दिनहुँ न्यानो पानी प्रयोग गरेर बिरुवालाई स्प्रे गर्नुहोस्।
हरेक तीन हप्ताको अवधिमा विकास अवधि (वसन्त र गर्मीमा) को समयमा, ईममेनु इनडोर बिरुवाहरु को लागि विशेष शीर्ष ड्रेसिंग संग उर्वरित हुनु पर्छ।
Ehmeyu सालाना प्रत्यारोपण को लागि बेहतर छ। मृदा मिश्रण तयार गर्न सकिन्छ वा यसलाई स्वतन्त्र र पत्ती पृथ्वी, रेत र कटाई मासबाट टुक्रा भएका टुक्राहरू वा ईटाईहरूसँग बनाउनुहोस्। आम्मी रोप्ने बर्तन धेरै गहिराइ हुँदैन। 2-3 दिन प्रत्यारोपण पछि, फूललाई ​​पानीमा राख्नु हुँदैन। राम्रो बिरुवाको अस्तित्वको लागि छायांकित स्थानमा यो समयमा पोष्ट राख्नुहोस्।
Ehmeya को पुनरुत्थान
बीउ र पार्श्व प्रक्रियाहरु द्वारा एहमेया को फूल मा वृद्धि हुन्छ। बीउबाट खेती गरिन्छ, रोप्पामा लगभग4वर्षमा बोसो हुने हुन्छ, र इम्मेयामा जुन जुनसुकै देखिने हो भने, फूल 1-2 भन्दा बढीमा आउँदछ।
आफ्नो हातमा रोजरी
कसरी फोकसबाट गोली लगाउनुहुन्छ?
Geranium tulip - विशेष प्रकार को pelargonium को हेरविचार नियम
बगैचाको लागि छाया-पनडुनेल पेनियल श्रबहरू
जाडोको लागि गाजर रोपण
माल्वा - बीउ बढ्दै जान्छ
गुलाबको विभिन्न प्रकार
स्ट्रबबेरी "सर्रिना" - किस्मको वर्णन
कद्दू - जब कटनी गर्न?
लामो समयको बिहान महिमा - रोपण र हेरविचार
नाशपाती "हनी" - विविधता को वर्णन
धातु मुक्त सिरेमिक्स
गर्भावस्थामा माइग्र्रेनको उपचार गर्नु भन्दा?
काली सागरको स्यान्डी समुद्र तटहरू
कार्ला ब्रुनीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र उनको क्यारियरको रूपमा गायकको रूपमा एक फ्रान्सेली साक्षात्कार दिनुभयो
इटालियन swimwear 2014
ओवनमा पनीर केक
स्त्रीत्व र मजाकियापन
डोमिनिकन रिपब्लिकमा सिजन
एक नाइट क्लब मा लडाइँ पछि जस्टिन बेब एक निजी द्वीप मा आराम गर्न गए
दृष्टिको लागि चश्मेका लागि महिला फ्रेमहरू 2016
25 अनियमित आविष्कारहरू जसले संसार परिवर्तन गर्यो
टी-शर्टको साथ ड्रेस गर्नुहोस् - कसरी फैलाउन लगाउने पहिरन लगाउने?
एलिस - शरद ऋतु-जाडो संग्रह 2015-2016
मेरी पत्नीले आफ्नो पति किन काट्न सक्दैनन्?
मोडलिंगको लागि नुहाउने आटाको लागि पकाउनुहोस्
सरेज संग ड्रेनिकी
खेती गर्ने साधारण रहस्य कसरी बान्नु हुन्छ
बेरोजगारीको क्राउन - संकेत
बुबाले आफ्नो6वर्षीय छोराको चित्र "एनिमेट" गरे!